Xawilaadda Dijital ah & Wareejinta Kuleyliyaha Flex Supplier |Alizarin
17 sano oo waayo-aragnimo warshadeed ah
10000㎡ Aagga warshadda
20000 mitir oo laba jibbaaran wax soo saarka sannadlaha ah
Hal qayb oo ka mid ah Fuzhou Alizarin Coating Co., Ltd.
Fuzhou Alizarin Coating Co., Ltd, oo la asaasay 2004, waa soo-saare hal-abuur leh oo ah inkjet & dahaarka laysarka midabka iyo khadadka khad ee khad, sawir-qaadaha laysarka midabka & naqshadeeyaha goynta.Ganacsigeena asaasiga ah wuxuu diiradda saarayaa soo saarista tayada sare, waraaqaha bandhiga dahaarka leh iyo filimaan dhowr nooc ah, oo u dhexeeya warbaahinta inkjet, Eco-solvent inkjet media, Warbaahin dareere khafiif ah, Warbaahin caabbinta biyaha ilaa warqadda wareejinta khad, midab Warqadda wareejinta laysarka, Eco-Solvent Flex Daabacan iyo Miiska La Jaro Polyurethane Flex iwm. Waxaanan leenahay khibrad ballaaran…
Guulaha iyo Abaalmarinta
Fuzhou Alizarin Coating Co., Ltd. ayaa la aasaasay.Isla sanadkaas, warqadda wareejinta inkjet-ka ayaa la bilaabay, taas oo ahayd shirkaddii ugu horreysay ee Shiinaha si guul leh u dhiirrigelisa codsigeeda.
Eco-Solvent PU flex daabacan ayaa soo galay suuqa.
Warqadda wareejinta midabka leysarka ayaa isla mar la soo bandhigay suuqa.
Alaabooyinka taxanaha filimada PU-ga ugu sarreeya ee la gooyn karo waxaa lagu xayeysiiyaa gudaha iyo dibaddaba.
Iibsiga in ka badan 10,000 mitir oo dhul warshadeed ah
Warshada ayaa u guurtay warshada cusub oo 6 jeer ka badan tii asalka ahayd.
Alaabooyin taxane ah oo PU ah oo la goyn karo oo dhaqaale ayaa lagu soo bandhigay suuqyada dibada.
Warshada Fuzhou Alizarin Coating Co., Ltd ayaa ku guuleysatay horyaalka Fujian High-tech Enterprise
Waxaan bixinaa PrettySticker HTS-300SRF PU Flex ah oo la daabici karo oo loogu talagalay dharka shaqada ee midabka leh, waxaad kordhin kartaa muuqaalka lakabka midabaynta ee dharkaaga shaqada ee iftiinka hoostiisa.
Daabacadaha: daabacayaasha inkjet-ka Eco-Solvent / HP Latex daabacayaasha inkjet daabacayaasha / daabacayaasha inkjet UV
Cutter: Dhammaan noocyada kala duwan ee vinyl goynta plotter
Kuleylka cadaadiska: 150 ~ 165 ° C iyo 15 ~ 25 seconds
Dharka: 100% cudbi, suuf iyo isku dhafka polyester-ka, 100% shiraac suuf ah, maqaar macmal ah iwm.
HTGD-300 waa walxo sawir-chromic ah oo dhalaalaysa saldhigga mugdiga ah ee 170 micron xargaha xaashida ah kaas oo lagu rinjiy karo midabada wax, saliidda saliidda, calamadaha fluorescent, qalin midabka, oo ay daabacaan daabacayaasha jet-ka caadiga ah
Eco-Solvent Metallic Printable PU Flex waxaa daabici kara dhammaan noocyada Eco-Solvent inkjet printer, hel adkeysi weyn oo leh midabka sawirka, dhaqida kadib.
Eco-Solvent Printable Vinyl (HTV-300S) wuxuu ku salaysan yahay filimka polyvinyl chloride kaas oo soo saaray si waafaqsan heerka EN17 oo leh koollo kulul oo kulul oo ku saabsan khadka filimka polyesterka, goynta heer sare ah iyo guryaha jaridda
2021 ReChina Asia Expo, Meey 19-21,Shanghai
Bandhiga ReChina ayaa sanad walba lagu qabtaa Shanghai tan iyo 2004. Iyadoo ah mid ka mid ah dhacdooyinka ugu muhiimsan ee madbacadaha iyo warshadaha alaabada, ReChina Expo waxaa si fiican u aqoonsaday khubarada warshadaha ee...
DPES Saxiixa Expo Shiinaha 2021
2021 DPES Guangzhou Bandhiga Caalamiga ah ee Xayeysiiska, DPES Saxiixa Expo Shiinaha 2021 Hoolka Bandhiga: Xarunta Ganacsiga Adduunka ee Poly, Guangzhou Poly Xarunta Ganacsiga Adduunka Bandhiga Ciwaanka: Ganacsiga Adduunka ee Poly ...
Bandhiga Daraasadda Kiiskeena
Wararka iyo Dhacdooyinka Muqaal
2022 DPES Saxiixa Expo Shiinaha (Guangzhou)002